Maxaa ku dhacay ninkii qoriga ku qabtay Soomaali ku jirtay McDonald's, Minnesota? - BBC News Somali
Maxaa ku dhacay ninkii qoriga ku qabtay Soomaali ku jirtay McDonald's, Minnesota?
Image caption Makhaayadda McDonald's ee Eden Prairie
Booliska ka howlgala deegaanka Eden Prairie ayaa sheegay iney baaritaan xoog leh ku wadaan dhacdo ku saabsan nin caddaan ah oo Isniintii bastoolad ku taagay dhallinyaro Soomaali-Mareykan ah oo ku jirtay maqaayadda McDonald's.
Sida la soo tabiyay, Muran ayaa dhex maray ninkaas iyo gabdho Soomaali-Mareykan ah oo ku jiray meheradda gudeheeda, oo ka carooday hadallo qallafsan oo uu ku yiri, waxayna xaaladda xumaatay ka dib markii ay dhallinyaro kale oo wiilal ah isku dayeen iney gabdhaha u hiilliyaan.
Ninka oo aan magaciisa la shaacinin ayaa markaas la soo baxay Bastoolad, isagoo ka dalbaday dhallinyarada iney dibadda ugu soo baxaan.
Muuqaal laga duubay qeybo ka mid ah dhacdadaas ayaa si weyn ugu faafay baraha xiriirka bulshada.
Waxaa muuqaalka laga arkayay shaqaale ka tirsan maqaayadda McDonald's iyo haweeneyda maamulaha ka ah oo ku qeylinaya dhallinyarada kuna khasbaya inay ka baxaan meheradda, arrintaas ayaana muran xoog leh dhalisay.
Dadka qaar ayaa maamulka McDonald's ku dhaliilay iney ka gaabiyeen sugidda amniga macaamiishooda, maadaama ay ka dalbanayeen iney banaanka ugu baxaan qof hubeysan oo u hanjabayay.
Image caption Telefoon ayaa lagu duubay qof ka mi dah shaqaalaha makhaayadda oo ku qaylinaya dhallinyarada
Maxaa ku dhacay ninka dhacdada ka dib?
Galinkii dambe ee maalintii Arbacada ayey booliska xireen ninka lagu tuhunsan yahay inuu falkaas sameeyay.
Eedeysanaha oo la sheegay inuu 55 jir yahay ayaa loo taxaabay xabsiga waxaana loo diiwaan galiyay dacwad uu nooceedu yahay weerar hubeysan.
Kiiskiisa ayaa loo gudbiyay xeer ilaalinta gobolka, si ay go'aan uga soo saaraan maxkamadeyntiisa.
Sidoo kale booliska ayaa wada baaritaan qota dheer oo ku saabsan arrintan.
Maamulka Maqaaxida McDonald's ayaa iyagana wajahaya cambaareyn xoog leh oo uga imaaneysa dhinaca shacabka, taasoo ku aaddan habka ay dhacdadaas u maareeyeen.
Cunsuriyadda ka dhanka ah Soomaalida Mareykanka
Dhallinyarada Soomaaliya ka soo jeedda ee Mareykanka ku sugan ayaa muddooyinkii dambe laga soo tabinayay dhacdooyin dhowr ah oo ku saabsan cunsurinimo iyaga ka dhan ah.
Jeylaani Xuseen oo ah madaxa hay'ad u doodda xuquuqda Muslimiinta Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay in falkan uu ka billowday hadallo aflagaaddo ah oo ka soo yeeray ninka.
"Gabdhaha waxaa u shaqeyn waayay taleefan ay rabeen iney ku bixiyaan lacag ay wax ku iibsanayeen, ka dibna wuxuu ninka ku yiri hadallo uu ku sheegayay iney ku nool yihiin lacagaha ceyrta ah, markii ay caroodeenna wuxuu billaabay inuu handado".
Dhanka kale, Jeylaani ayaa sheegay iney qaadeen tallaabooyin daba socda falkaasi.
"Annagu ka hay'ad ahaan waxaan hadda wali macluumaadka ka uruurineynaa dhallinyarada ay arrintan ku dhacday ee wiilasha iyo gabdhaha ah, waxaana dooneynaa inaan dhawaan bayaan ka soo saarno, oo aan fiirinno sidii dhibaatadan soo noqnoqotay xal loogu heli lahaa".
Qof walba oo haya macluumaad ku saabsan dhacdadan ayaa laga codsaday inuu la xiriiro booliska deegaanka Eden Prairie, oo uu kala hadli karo taleefanka lambarkiisu yahay 952-949-6200, si uu ula hadlo kooxda baaritaanka wadda.